Ngoko ufuna ukuzithengela izicumbiso ezintsha okanye uye kwi-salon kwiinkqubo, ucocekile, uphuculise, utyise ulusu! Kodwa ehlotyeni nasekwindla, kunye nezithelo kunye nemifuno, unokudala kwaye usetyenzise ikhaya lakho kwaye ungabonakali ubuso bakho kuphela. Kuba ukuba loo ntokazi ibheka ubutyebi bayo obuncwane, njengengcambu yakhe eyintloko, intamo ingahlali ingaqeqeshelwa njengesihlobo esisweleyo kwaye inganiki nje kuphela ubudala benkwenkwezi , kodwa iphinde iyongeze iminyaka engama-5-7.
Masks kwesikhumba sentamo.
2 Iifatata ezitshatileyo zigalela kwi-puree, yongeza i-yolk, ujan, i-teaspoon ye-glycerin. Le yilezi zilwanyana ezifudumele ezifudumeleyo kwi-cheesecloth kwaye zibophe entanyeni. Phezulu nge-polyethylene kwaye ulungise ngekhanda okanye ibhanki e-elastic. Gcina i-compress enjalo malunga nemizuzu engama-20 ukuya ku-30, ide ipholile ngokupheleleyo. Geza intamo yakho ngamanzi afudumele okanye nje uthabise. Kwanele ukuphinda le maski 1-2 ngamaxesha ngeveki.
Iiparafini zitshiswa kwindawo yokuhlambela amanzi: faka iiparafini kwisikotyana esincinci, uthele ipopi enkulu yamanzi phakathi okanye ngaphezulu kwaye uvumele ipenki encinane iparafini igijimele emanzini, ubeke ipompo enkulu emlilweni, vumela amanzi aphephe. Ngaphambi kokuba ufake iparfini, kufuneka uvumele ukupholisa phantsi (jonga ukushisa komntwana omncinci, emva kwesandla sakho okanye umgca kwi-elbow yakho, ukuba akutshisanga kakhulu - ixesha lokufaka ebusweni bakho).
Iiparafini eziphambili ukubeka elukhunjini entanyeni ngoluhlu oluqhubekayo lwemizuzu engama-20 ukuya ku-30, shiya ukupholisa. Susa ngokucophelela, uhluthwe emacaleni. Kufuneka ukhunjulwe ukuba amanzi akufanele afake iparafini. Ngoko ke, izitya apho zifudumele zimele zime. Ungafaki iparfini kwi-klasi emanzi okanye ekhukhulayo.
Imaski ye-paraffin isetyenziswe ngamaxesha angama-1-2 ngeveki kunye nekhosi eyi-10-15. Emva kokususa iparafini, unako ukugcoba isikhumba sentanyeni ngesisiti sezondlo. Ngaphantsi kwemizuzu engama-20-30 emva kokususa i-mask, musa ukuphuma kwisitalato. Ukuba emva kokuba iparafini yokuqala isuswe kakuhle, ngaphambi kwesigqubuthelo esilandelayo, sasaza intamo ngeoli yemifuno okanye ukhilimu onomsoco ongenayo amanzi.
Iipuniwe ezi-3 ze-oat flakes (nje musa ukusebenzisa i-flakes, esele isetyenziswe ngaphambili, thabatha i-oatmeal elula) uthele i-50 ml yobisi olufudumeleyo, unxinzelele imizuzu engama-20, ubilise kwindawo yokuhlambela ngamanzi imizuzu eyi-10 (okulula nokukhawuleza ukupheka kubisi imizuzu emi-5), pholisa okuncinci, yongeza isipuni se-honey. Faka isicelo entanyeni imizuzu engama-20, ide ikhuphe ngokupheleleyo, hlambulula ngamanzi kwiqondo lokushisa.
Ukufudumala i-oyile yemifuno, uyenze umlenze obuncitshisiweyo woboya bekotoni, ubeke entanyeni. Ngaphezulu, gubungela uboya bekotoni kunye nephepha lesikhumba kunye nethawula (ukuze ukushisa kuthathe ixesha elide). Emva kwemizuzu engama-20 ukuya kwimizuzu engama-30, ususe imaski, hlamba ulusu ngamanzi afudumeleyo, usule omile. Ukuthintela i-oyile ekuphumeni ngexesha lemaski, gcina uboya bekotoni kwinqanaba lekhola.
1. Imaski kufuneka isetyenziswe kwisikhumba esicocekileyo.
2. Iimaski kunye neenkomfa entanyeni zifuna ukuba awuphazamiseki yimfuyo kunye nemisebenzi yasemakhaya ubuncinane ubunesiqingatha seyure. Ukongezelela, akuyena wonke umntu oza kufumana amandla okumthanda ubuhle bakho ngexesha oyafana kakhulu nomama. Khawucinge nje: umzobo obomvu ebusweni kunye neparafini egoba entanyeni, ephezulu eboshwe nge-bandage bandage. Abasetyhini baya kukwazi ukukuqonda kwaye bakucelwa ukuba bahlanganyele iresiphi, kodwa umntu othandekayo kufuneka abe nesihe kwaye akhuselwe kuloo mboniso. Mbonise umphumo ogqityiweyo.
3. Ukuba wenza i-mask okokuqala - qaphela, ngokukhawuleza unesifo esithintekayo kule nto. I-mask eye yamnceda kakhulu intombazana yakho ayinakuyithandana nesikhumba sakho, i-allergen ingaba yinto esetyenziswa ngokuqhelekileyo kunye nezinto zendalo njengobusi okanye ubisi.
Ubuhle budinga umnikelo, kodwa zama ukuzingelela kunye nempilo yakho.
Ndiyathanda ukuba uhlale uphilile kwaye uhle.
Kutheni izikhonkwane ezinemilenze zidibeneyo: njani ukujongana nale ngxaki?
Ukutyelela kokuqala kwi-solarium
Iintsilelo ezibonakalayo ezinobungakanani
I-Korean Elixir: I-Spray-Fluid Erborian Herbal Drop Mist
U-Alexander Pankratov - Umnyama: i-biography
U-Prigogine uhalalisela ngokuzalwa kwamawele, isithombe
Inzuzo kunye neyingozi yeromegranate ijusi
Ukupheka isonka ekhaya
Ukushicilelwa okutyunjweyo-imbonakalo yeholide-2016
Stromboli nge ham, anyanisi kunye noshizi
Ugogo xa ushiye ikhefu lomzali
Isaladi "Isidleke sokhuni lomthi"
Imithetho ephambili yokudlala ngothando nomphathi
Ukufunda indlela yokwenza i-manicure matt ekhaya
Yintoni eya ku-St Petersburg ngoJulayi ngo-2016 iya kuqikelelwa yiziko le-hydrometeorological center. Ukuphononongwa ngabakhenkethi malunga nemozulu kwaye bahlala eS Saint Petersburg
I-Omelet ne-honey agarics